ख्रीष्टमस र ईस्टरको सत्यता
द्वारा लिखित : जैक पूनेन कोटिहरू : चेलाहरू धार्मिक वा आध्यात्मिक खोजीकर्ता
माननसहरुलाई भेडाससत तलुना गररएको छ। अनन भेडाहरुको कुनै प्रश्न नगरर बगाललाई पछ्याउने प्रनिनि हुन्छ। येश ु आउनुभयो र हामीलाई परमेश्वरको िचनद्वारा सब ै कुराहरु जााँच्नपु छछ भनेर ससकाउनभु यो। फररसीहरुले चााँही मानि परम्परालाई उचाले। येशलु े परमेश्वरको िचनलाई उचाल्नभुयो।अनन माननसचााँनह परमेश्वरको मखु बाट ननस्कन े प्रत्येक िचनले बााँच्नेछ।(मिी ४.४) येशु जनु लडााँइ फररसीहरुसाँग ननरन्तर लनडरहनभुएको नियो, त्यो यगुौँ लामो मानि परम्परा निरुद्ध परमेश्वरको िचनको लडााँइ नियो। मण्डलीमा, हामीपनन त्यस्तै लडााँइमा सामेल छौँ। केिल परमेश्वरको िचनमात्र त्यो ज्योनत हो जनु अनहले हामीसाँग यस संसारमा छ। अनन शरुुमा जब परमेश्वरले ज्योनत बनाउनभुयो, उहााँले तरुु न्त ै त्यसलाई अन्धकारबाट अलग गनछभुयो। त्यो अन्धकारलाई दिु ैपाप र मानि परम्पराको रुपमा सलन सनकन्छ। हामीलाई पनन यी कुराहरुबाट परमेश्वरको िचनलाई अलग राख्न भननएको छ तानक मण्डलीमा कुन ैनमसािट नहोस।् ख्रीष्टमस ख्रीष्टमसलाई सलऔ, धेरैले यसलाई येशु ख्रीष्टको जन्मनदनको रुपमा मनाइरहेका छन।् सबै धमछका पसलेहरु ख्रीष्टमसको प्रनतक्षामा हुन्छन् नकननक यो समय उनीहरुका लानग धरै नाफा कमाउने समय हो। यो एक व्यापाररक चाड हो, कुनै आसिक चाड होइन। यस बेला ख्रीष्टमस काडछ र उपहारहरुमा करोडौँ
रुपैँया खचछ गररन्छ। मादक पदािछको नबनि पनन यस समयमा बढ्ने गछछ। के यो सााँच्चै परमेश्वरको पत्रुको जन्मनदन हो त, नक अरुकै? सिछप्रिम हामी परमेश्वरको िचनमा हेरौ। बाइबलले हामीलाई बताउाँछ नक गोठालाहरु आफ्ना भेडाहरुसनहत यहुनदयाको मदैानहरुमा निए, त्यनह रात येश ुबेिलेहेममा जन्न्मन ुभएको नियो।(लकुा २.७-१४) प्यालेस्टाइनमा गोठालाहरुले बगाललाई अक्टुबरदेसख फेब्रुअरीको सरुु िात सम्म रातमा बानहर खलु ा मदैानमा छोड्दैन निए- यी मनहनाहरुमा िर्ाछ हुन्यो र जाडो हुन्यो। त्यसलैे िास्तिमा येश ुलगभग माचछ र सप्टेेम्बरको नबचमा जन्न्मनभु एको हुनपु छछ। तब नडसम्ेबर २५ अकैको जन्मनदन हुनपुछछ जनु एक पररिनतछत इसाई जगतमा असम्बन्न्धत माननसहरुले सरुु गरेका िा िपेका हुनपुछछ। यसबाहेक, यनद हामीलाई येशकुो जन्मनदन िाहा भएको भए पनन प्रश्न यो हुनेछ नक के परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई यो चाड मनाउन लगाउन ुहुन्यो त? येशकुी आमा मररयम, उहााँलाई येशकुो जन्मनदन िाह भएको हुनपुछछ। अनन उहा ाँ पेन्टेकोस्टको नदनपरछ पनन िप्रु ै िर्छ सम्म प्ररेरतहरु साँगै हुनुहुन्यो। तपैनन कनहाँपनन येशकुो जन्मनदनको बारेमा उल्लेख गररएको छैन। यसले के देखाउाँदछ त? यनह मात्र नक- परमेश्वरले जाननजानन येशकुो जन्मनमनत लकुाउनभुयो नकननक उहााँ मण्डलीले यो मनाएको चाहन ुहुाँदैनयो। येश ुकेिल एक साधारण मरणशील माननस मात्र हुनहुुन्न जसको िर्छमा एकपटक जन्मनदन मनाइनपुछछ। उहााँ परमेश्वरको पत्रु हुनहुुन्यो " जसको न नदनहरुको शरुु छ" हामी माननसहरुको जस्तो होइन (नहब्रु ७.३)। परमेश्वर हामी उहााँको जन्म, मत्यृ ,ु बौररउठाइ र
स्वगाछरोहणको बारेमा नदनहुाँ गम्भीर भएको चाहनहुुन्छ, केिल िर्छमा एक पटक मात्र होइन। परुानो करार र नयााँ करारको सभन्नता बुझ्दा पनन हामी यो बझ्नु सक्षम हुन्छौँ नक नकन परमेश्वर आफ्ना सन्तानहरुले कुन ै नदनलाई निर्ेश पनित्र नदनको रुपमा मनाएको चाहनहुुन्न। परुानो करारमा इस्राएलीहरुलाई कुन ैएक ननसित नदन निशर्े पनित्र नदनको रुपमा मनाउन आज्ञा गररएको छ। तर त्यो केिल एक छायााँ मात्र नियो। अब नकननक हामीसाँग ख्रीष्ट हुनहुुन्छ, परमेश्वरको ईच्छा यो हो नक हाम्रो नदनहुाँको जीिनमा हामी सध ैँउनिकै पनित्र होऔ। साप्तानहक निश्राम नदन पनन नयााँ करारमा समाप्त गररएको छ। यनह कारणले नयााँ करारमा कुन ै पनन पनित्र नदनको उल्लेख गररएको छैन।(कलस्सी २.१६,१७) तब कसरी ख्रीष्टमस र ईस्टर ईसाइ जगतमा प्रिेश गयो त? जिाफ यो हो नक - त्यसरीन ैजसरी सशश ुबन्प्तष्मा, दशांश, पजुाहरीनगरी, अनन अरु िप्रु ैमानि परम्परा र परुानो करारको ररनतहरु मण्डलीमा प्रिेश गरे- शतैानको सक्ष्ुम कामद्वारा। जब सम्राट कन्टेस्टाइनले ४औाँ शतान्िमा रोमलाई ख्रीनष्टयन साम्राज्य घोर्णा गरे, िप्रु ैमाननसहरु हृदयको पररितछन नबना न ै ख्रीनष्टयन बने(नामको मात्र)। तर उनीहरु आफ्ना दईु ठुला चाडहरु छोड्न चाहाँदैन निए- दिु ैसयूछको पजूासाँग सम्बन्न्धत नियो। एउटा चानहाँ नडसम्ेबर २५ मा सयुछ देिताको जन्मनदन नियो- यसबेला सयुछ तल दसक्षणी गोलाधछमा पगुेर आफ्नो नफनतछ यात्रा सरुु गछछ(जाडोको संिान्न्त)। अकोचानहाँ माचछ-अनप्रल नतरको िसन्तको चाड नियो- यस चाडको समयमा उनीहरु जाडो मौसमकोको अन्त्य र उनीहरुको सयुछ देिताले ल्याएको गमी मौसमको को खसुीयाली मनाउाँि।े उनीहरुले आफ्नो सयुछ
देितालाइ "येशु" भनेर नामाकरण गररनदए र ती दुई चाडहरु मनाउन ननरन्तरता नदइरहे। अनहले पनन ख्रीनष्टयन चाडरुको रुपमा मनाउछन ्र त्यसलैाई ख्रीष्टमस र ईस्टर भन्छन्। इन्साइक्लोपेनडया नब्रटाननका (धमछननरुपेक्ष इनतहासमा एक अनधकार) साँग ख्रीष्टमसको सरुुिातको बारेमा हामीलाई बताउनको लानग केनह कुरा छन ्- नडसम्ेबर २५ नफ लोक्लसको अपरासजत सयुछको नमथ्राईक भननन े प िछ नि यो। अनहलेको ख्रीष्टमस को ररनतनत नि ह रु ख्रीनष्ट य न कालभन्दा अनघको समयको ररनतनिनतहरुको निकससत रुप हो - जनु मौसमी, मनुतछपजुक र रान्रिय ररनतनिनतबाट आएको हो। ख्रीष्टको जन्मनदनको नमनत कनहल्यपैनन सन्तोर्जनक रुपमा स्थायी भएको निएन । तर जब चचछका नपताहरुले यो चाड मना उने ननणयछ गरे, उनीहरुले बसुद्ध मानीप ु िछ क त्यनह जाडोको स ं िान्न्त लाई रोजे जनु नदन मा ननसह रुको नदमागमा दृ ढतापिुछक बसकेो नियो अनन यनह उनीहरुको लानग सबभैन्दा महत्वपणु छपिछ नियो। ज स री ख्रीष्ट य न म त मू नतछ प जु क ह रु को माझ फै सल यो, जाडोको सं िान्न्त को पिछको धेरैजसो ररनतहरु ख्रीष्टयन भनननेहरुको चाडमा नमसस यो। ( १ ९ ५ ३ स ं स क र ण, ख ण् ड ५, प ृ ष्ठ ६ ४ २,६ ४ ३) यी मूनतछपुजक ररनतनिनतहरु ननम्रोदद्वारा सरुु गररएको बेनबलोनन धमछबाट उत्पनि भएको नियो (उत्पनि १०.८-१०) ईनतहास बताउाँदछ नक उसको मत्यृपुरछ उसनक श्रीमती सनेमरानमसल े एउटा अिघैाननक बच्चा जन्माइन, जसको निर्यमाचानहाँ उनल े ननम्रोद फेरर जीनित भएको दाबी गररन।् यसरर आमा र बच्चाको उपासना गनछ सरुु भयो जनु शतान्िऔाँ परछ ईसाइहरुद्वारा 'मररयम र येशु'मा रुपान्तरण गररयो। यी बाल-देिताको पजुा बेनबलोननहरुले नडसम्ेबर २५ मा गि।े सनेमरानमस स्वगछनक रानी निइन(्यनमछया ४४.१९)। शतान्िऔाँ
परछ उनलाई एफेससमा डायना िा आटेनमस भनेर पजुा गररयो(प्ररेरत १९.२८)। सनेमरानमसले मरेको रुखको ठुटाबाट रातारातन ैएउटा परुा बढेको सदाबहार रुख उनम्रएको दाबी गररन।् यो ननम्रोदको पनुजछन्मको प्रनतक र उनले मानि जानतलाई स्वगीय उपहारहरु ल्याएको प्रनतक नियो। यसरी देिदारको रुख काट्ने र त्यसमा उपहारहरु झुन्डाउने चलन सरुु भयो। यनह न ैआजको ख्रीष्टमस रुखको सरुुिात हो। (गगुल खोजले यो सब ैतयहरुलाई प्रमानणत गछछ ) "परमप्रभु यसो भन्नहु ुन्छः अन्यजानतहरुको चाल नससक, र आकाशका सचन्हहरुदेसख भयभीत नहोओ; नकननक अन्यजानतहरु ता तीदेसख भयभीत हुन्छन।् ३ नकननक जानत-जानतका माननसहरुका रीनतहरु व्यिछका छन;् नकननक कसलैे िनबाट एउटा रुख काट्छ; यो ता बन्चरोद्वारा गररने काररगरका हातहरुको काम हो। ४ नतनीहरुले चााँदी र सनुले त्यसलाई ससाँगाछछन्; त्यो नहल्लोस ्भनेर नतनीहरुले त्यसलाई कीलाहरु र हतौनडहरुले बसलयो पाछछन।् (यनमछया १०.२-४) ईस्टर ईस्टर शि स्वगछनक रानीको उपनाम 'इस्तार' र 'अश्तारोत' बाट आएको हो। (हेनछहुोस् १ राजा११.५) -सलुेमानले पजुेका मनुतछहरु मध्ये एक। राज्यहरु अनसुार यस नामको अरु रुपहरु निए। इन्साइक्लोपेनडया नब्रटाननका यसरी भन्छः " जमछन शि ' ओस्टर ' साँ ग नम ल्दोज ु ल्दो अं ग्र े जी श ि 'ईस्टर'ले मध्य यु रोपका ट्यटुोननक जनजानतहरूको माझ इसाई धमछ ऋ णी भएको प्रकट गदछछ। ख्रीनष्टयन धमछ ट्यटुोनस पग्ुदा यो ठूलो
ख्रीनष्ट यन पिछ उनीहरुको कुनै एक उत्सिमा सन्म्मसलत भयो। अन्यजानतहरुको िप्रु ैरर नतनिनतहरू उनीहरूको 'िसन्तको पिछ ' कोसाि नमल्यो। त्यो पनुरुत्थानको चाड िसन्तमा ियो, यस चाडमा मत्यृमुानि जीिनको निजयको उत्सि मनाइन्यो, यसरी ती सख्रनष्टयन भनननेहरुलाई यस चाडको साि आफ्नो चाड नमलाउन ससजलो भयो , यो नहउाँदको अन्त्य , नयााँ िर्छको जन्म र सयूछको नफतीको सम्मानमा आयोसजत ट्यूटो नसको सबभैन्दा रमाइलो पिछ नियो । िसन्तकी देिी इओस्ट्िे (िा ओस्टेरा) ले यस चाडलाई ख्रीनष्टयन पनित्र नदन को नाम नदए । अण्डाहरूको उिछराको प्रतीकको रूपको धारणा र ननिकृत जीिनको धा रणाको श्रे य परुाना कालका नमश्रीहरू र पससछयनहरूलाई जान्छ जसको िसन्त चाडको समयमा अण्डाहरूलाई रङ्गा उने र खाने चलन नियो । यो परुानो धारणाः जीिनको प्रतीकको रुपमा अण्डाको महत्व , ससजलै अको धा रणाः प नु रु त्थान को प्र तीक को रू प मा अण्डा को रुप मा पररणत भयो। परुानो अन्धनिश्वासका अनसुार ईस्टर को नबहान उदाउाँदो सयुछले स्वगछमा नाच गछछ ; यो निश्वास िसन्तको गमीको पिछको हो भन्ने कुरापिा लागेको छ ; जब द शछ क ह रू ले स यू छ को स म्मान मा नाच हे रे ... प्रोटे स्टे न् ट मण्डलीहरूले पनन इस्टर को नबहान सयूोदय मा सिेाहरू राख्न े गन ेप्र िालाई अ न ु स र ण ग र े "( १ ९ ५ ९ स ं स क र ण, ख ण् ड ७ , पष्ठृ ८५९,८६०)
येश ुको मत्यृ ुर बौररउठाइ न ैससुमाचारको मख्यु सन्देश हो। रोनट भचााँइ मात्र त्यो एक तररका हो जसद्वारा हामीले यी कुराहरु सम्झना गरेको परमेश्वर चाहनहुुन्छ, जनु हामील े मण्डलीमा एकसाि भाग सलनपुछछ।जब हामी रोनट भाँचाइमा सहभागी हुन्छौँ, हामी केिल उहााँको मत्यृकुो मात्र गिानह नदाँदैनौ तर उहााँसाँग ैहाम्रो मत्यृकुो पनन गिानह नदन्छौँ। गडु फ्राइडेको
भािनािाकता र ईस्टरको भािनािकताले येशकूो परछ लाग्नपुन े आिश्यकता पनि नभई ररिो ररनतनिनतमा मात्र ध्यान नदन लगाउाँछ। परमेश्वरको िचन नक माननसको परम्परा ? ख्रीष्टमस र ईस्टरको मनाउने कुराको पछानड माननसहरुमा परम्पराको अनसुरण गने सबभैन्दा घातक ससद्धान्त छ जनु कुराको परमेश्वरको िचन अनसु ार कुन ैआधार छैन। यी परम्पराहरुको यनत बसलयो शनि छ नक िप्रु ैनिश्वासीहरु जो पनित्रशास्ट्त्र पछ्याउने गछछन;् उनीहरु अझैपनन ख्रीष्टमस र ईस्टर मनाउन छोड्न गाह्रो मान्छन।् अचम्मको कुरा त यो छ नक िप्रु ैनिश्वासीहरु यो मान्न ईच्छुक छैनन ्जनु कुरा धमछननरुपेक्ष लेखकहरुले (जस्तो नक मानि उल्लेसखत नब्रटाननका इन्साइक्लोपेनडयाका लेखकहरु ) पनन ससजल ैप्रष्टसाँग बझुेका छन्- नक साधारणतया ख्रीष्टमस र ईस्टर मनुतछपजुा सम्बन्न्धत चाड हो। नाम मात्र पररितछन गनाछले यी चाडहरु सख्रनष्टयन बन्दैनन्। जसरी हामीले सरुुमा भन्यौँ, येश ुफररसीहरुसाँग ननरन्तर लडााँइमा हुनहुुन्यो - मानि परम्परा निरुद्ध परमेश्वरको िचनको लडााँइ। येशनुे पापको निरुद्धमा प्रचार गदाछ भन्दा पखुाछहरुको परम्पराको निरुद्धमा प्रचार गदाछ बनढ निरोधको सामना गनछभुयो। यनद हामी उहााँ जनिकै निश्वासयोग्य छौँ भने हामीले पनन यस्त ै अनभुि पाउनेछौँ। परमेश्वरको िचन मात्र हाम्रो मागछननदेशक हो, माननसहरु होइनन्जो परमेश्वरको िचन अनसुार नहाँड्दैनन।् (रोमी ३.४ ) पािलको सशक्षालाई समेत बेररयालीहरुले पनित्रशास्ट्त्रहरु मतुानबक जााँचे, र पनित्र आिाले पनन उनीहरुको प्रशंसा गनछभुयो(प्रेररत १७.११)।
यो हामी सबकैो लानग एक असल र अनसुरणीय उदाहरण हो। दाउद परमेश्वरको आफ्नै हृदयको व्यनि निए। तरैपनन चासलस िर्छसम्म उनले इस्राएलीहरुलाई मोशाको त्यो नपिलको सपछ पज्नुे अनमुनत नदए, यो नजाननकन नक त्यो ता परमेश्वरको लानग घनृणत छ। उनलाई त्यस्तो स्पष्ट मनुतछपजुामा समेत कुन ैप्रकाश निएन। राजा नहजनकया ती िोरैमध्यका राजा निए जसलाइ यो मनुतछपजुक अभ्यासको पदाछफास र नष्ट गनछ प्रकाश नदइयो। (२ राजा १८.१-४)। हामी ईश्वरीय माननसहरुलाइ पछ्याउन सक्छौँ जब उनीहरुको जीिन परमेश्वरसाँग नठक सङ्गनतमा हुन्छ, तर उनीहरुलाई माननसको परम्पराको निर्यमा प्रकाश नभएको समयमा होइन। हाम्रो सरुक्षा भनेको केिल परमेश्वरको िचनको सशक्षा पछ्याउनमुा छ, यसमा िप्न ुिा घटाउनमुा होइन। अरुको न्याय नगर अन्ततः ख्रीष्टमस र ईस्टर मनाउने ईमानदार निश्वासीहरुप्रनत हाम्रो दनृष्टकोण कस्तो हुनपुछछ त? यो जान्न जरुरी छ नक ख्रीष्टमस र ईस्टर नमनाउाँदैमा हामी आसिक हुने होइन। र ती चाडहरु मनाउने निश्वासीहरु शारीररक हुने होइन। ती निश्वासीहरु आसिक हुन ्जो आफ्नो नदनहाँको जीिनमा आफैलाइ इन्कार गदै र पनित्र आिाले भरपरु हुाँदै येशलुाइ पछ्याउाँछन्- चाहे उनीहरु ख्रीष्टमस र ईस्टर मनाउन्िा नमनाउन।् त्यसकारण जब हामी यी चाड़ हरू मनाउने निश्वासीहरूलाई भेट्छौं, हामी यो कुरामा पयाछप्त अनग्रुही हुनपुदछछ नक उनीहरू यी चाडहरूको मनूतछपजू क उत्पनिको बारेमा अनजान हुन
सक्छन।् त्यसोभए यी चाडहरु मनाउाँदा नतनीहरूले कुन ैपनन नहसाबले पाप गरररहेका हुाँदैनन।्। अकोनतर, यनद हामी उनीहरूलाई न्याय गछौं भने हामी पाप गरररहेका हुन्छौं। नडसम्ेबर २५ सामान्यतया सबकैो लानग छुिीको नदन हो र यसको िरपरका नदनहरूमा पनन स्कूलहरूमा नबदा हुने गछछ, धेरैले यस अिनधलाई िर्छको अन्तमा पाररिाररक पनु: एकताको लानग प्रयोग गछछन ्- जनु धेरै राम्रो कुरा हो। अनन नकननक केनह व्यनिहरू िर्छको दईु पटक मात्र चचछका सिेाहरूमा भाग सलन्छन ्(नडसम्ेबर २५ र इस्टर सप्ताहमा); मण्डलीमा ती नमनतहरूमा सिेाहरू राख्न ुराम्रो हुन्छ, तानक ती नदनहरुमा त्यस्ता माननसहरूलाई ससुमाचार प्रचार गनछ सनकयोस्र येशू हाम्रो पापबाट हामीलाई बचाउन यस पथ्वृीमा आउनभुयो र उहााँले हाम्रो लानग मत्यृ ुर शतैानलाई सजत्नभुयो भन्ने कुरा बझुाउन सनकयोस्। सााँचो निश्वासीहरू आफ्नो जीिनको हरेक नदनका लानग आभारी हुन्छन ्नक येश ूजन्मनभुयो र उहााँ नतनीहरूका पापहरूका लानग मनछुभयो र फेरर बौरी उठनभुयो - केिल िर्छको दईु पटकमात्र होइन। इसाईमतको शरुुआती नदनहरूमा, केही इसाईहरूले निश्राम नदन मनाउाँि े- जनु निष्टमस र इस्टर जस्त ैगरै-इसाई धानमछक चाड नियो। त्यसकारण पनित्र आिाले पािललाई रोमी १४ लेख्न प्ररेरत गनछभुयो तानक अरू इसाईहरुलाई न्याय गरेर पाप नगनछ चेतािनी नदन सनकयोस्। यो ख्रीष्टमस र ईस्टर मनाउनेहरूको न्याय गन े व्यनिहरूका लानग अत्यन्त राम्रो चेतािनी हो।
जो निश्वासमा कमजोर छ,उसलाई ग्रहण गर, तर शङ्कापणु छ कुराहरुको निर्यमा िादनििाद गनछलाई होईन; अकाछको नोकरलाई न्याय गन ेनतमी को हौ? कसलैे एउटा नदन अकोभन्दा ठुलो मान्छ; अकोले सब ैनदन एकनास ठान्छ।जसले नदन मान्छ, उसले प्रभकुै ननन्म्त मान्छ; नकननक उसले परमेश्वरलाई धन्यिाद चढाउाँछ। हरेक आफ्न ैमनमा परूा ननसित होस।् अनन जसले मान्दैन, उसले प्रभकुै ननन्म्त मान्दैन, र परमेश्वरलाई धन्यिाद चढाउाँछ। तर नतमी नकन आफ्नो भाईको न्याय गदछछौ? अििा नकन नतमीआफ्नो भाइलाई तच्छु ठान्दछौ? नकननक हामी सबजै ना ख्रीष्टको न्यायआसनको साम ु उसभनेछौ। र हामीमध्ये हरेकले आ-आफ्नो लेखा नदनेछ। (रोमी १४)। र यनह न ैउिम शिहरु हुन ्जससाँगै ख्रीष्टमस र इस्टरको यस अध्ययन अन्त्य हुन्छ।